ကောင်းသောနံနက်နှိုးစက်နာရီ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ကောင်းသောနံနက်နှိုးစက်နာရီ
ကောင်းသောနံနက်နှိုးစက်နာရီ APK ကို
နှိုးစက်နာရီကောင်းမွန်သောနံနက်အားဖြင့်သင်တို့ကိုလန်းဆန်းနှင့်သရုပ်ြပနှိုးထ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသိပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာသင့်ရဲ့ခေါင်းအုံးဘေးမှာဒီအသိဉာဏ်နှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့နာရီနဲ့ကောငျးတဲ့ခံစားချက်အတွက် Start!
* Intelligent ပါတီအား-Up: သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကနေနှိုးစက်နာရီမော်နီတာအချက်ပြမှုများကိုခွင့်ပြုပါရန်နီးကပ်လာသည်သင်သင့်ရဲ့ Android နေရာနှင့်သင်ပေါ့ပါးဆုံးအဆင့်၌ရှိကြ၏တဲ့အခါမှာညင်သာစွာသငျသညျနှိုး
* အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: သင်၏အိပ်စက်ခြင်း၏အရည်အသွေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်, နာရီအိပ်ပျော်ကိုခြေရာခံရန်လွယ်ကူ-to-ဖတ်ဂရပ်များအပေါ်စာရင်းဇယားအရ
* နှိုးစက်တီးလုံး: နူးညံ့သိမ်မွေ့နှင့်သဘာဝသံကိုသတ်မှတ်ထားသို့မဟုတ်သင့်တစ်နေ့တာချွတ်သရုပ်ြပစတင်ရန်သင်အကြိုက်ဆုံးဂီတကိုရှေးခယျြနဲ့ဘယ်တော့မှအရင်ကဲ့သို့မှုတ်သွင်း
* လျှော့ပေါ့အသံသို့မဟုတ်အဖြူဆူညံသံ: သင်၏စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးသီချင်းတွေကိုနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းစာရင်းကိုဖန်တီး
* အိပ်စက်ခြင်းရည်မှန်းချက်: ကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ဦးတည်သငျသညျအားပေးဖို့နေ့စဉ်နှင့်အပတ်စဉ်ဒေတာနှင့်အတူသတိပေးချက်များရ
* ညစဉ်မုဒ်: သင်သည်မည်သည့်ညဥ့်စာရင်းဇယားကိုစုသိမ်းရန်မလိုအပ်ကြပါလျှင်တစ်ဦးရိုးရှင်းသောရာဘေးနာရီအဖြစ်သင့်ရဲ့ device ကိုသုံးပါ
* မိုးလေဝသအခြေအနေများ: သင်၏တည်နေရာလက်ရှိရာသီဥတုအခြေအနေနှင့်အတူအလွယ်တကူရှေ့ဆက်သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာစီစဉ်ထားသည်။
ညစဉ်ညတိုင်းကျွန်တော်အိပ်စက်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်တဆင့်သို့သွား - အလင်းထဲကနက်ရှိုင်းရန်။ ငြိမ်ဝပ်စွာနေနှိုးထခြင်းနှင့်နိုးထအပေါ်သို့ပိုပြီးလုံ့လရှိသူခံစား၏လျှို့ဝှက်ချက်ပေါ့ပါးဆုံးအဆင့်တစ်ကာလအတွင်းနိုးထဖို့ပါပဲ။
အဆိုပါနှိုးစက်နာရီကောင်းမွန်သောနံနက်သင်တို့အိပ်ပျော်နေစဉ်သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုများကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်သင်တို့အထဲ၌နေသောအဆင့် detect လုပ်ဖို့သင့်ရဲ့ device ကိုသို့တည်ဆောက် accelerometer ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒါဟာပါတီအား-Up မတိုင်မီ (ပုံမှန်အားဖြင့်) တစ်ဦး 30 မိနစ်ဝင်းဒိုးကိုဖန်တီး? အချိန်ကိုသင်သတ်မှတ်ပါနှင့်သင်ပေါ့ပါးဆုံးအဆင့်အနေဖြင့်နေစဉ်နှိုးဆော်သံဒီဝင်းဒိုးကိုအတွင်းပယ်တတ်၏။ ထို့ကြောင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဦးနှောက်ကိုနှိုးထသဘာဝကျကျနဲ့ညင်ညင်သာသာနဲ့သငျသညျလျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့် grogginess နှင့်အတူငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောခံစားရတယ်။
နံနက်ယံ၌သင်တို့လည်းမရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံး stats.This သတင်းအချက်အလက်သင့်လက်ရှိအချိန်ဇယားကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် under- သို့မဟုတ် oversleeping ရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးသည်နှင့်အတူတစ်ဂရပ်၏ပုံစံအတွက်ညစဉ်ညတိုင်းစံချိန်ရယူပါ။
Apalon Apps ကပ: အားဖြင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်